habab si xor ah u video ka iPhone wareejiyo iPad
3 Siyaabo si ay u gudbiyaan Video From iPhone Si iPad
Apple faaniyaa waxyaabaha ay gaar iPhone iyo iPad. Iphone waa videos duubo wanaagsan marka loo eego in ay kiniin; iPad halka iPad waxaa caan ah oo ay u video daawashada aan caadi ahayn. Sidaas qaab ama mid kale oo laga yaabaa inaad dhowr videos on your iPhone iyo aadna doonayso inaad ku wareejiso iPad. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay in la wareejiyo kaniini iyo kulma qaababka ay la yaab leh in dunidu ku riyaaqayo. Waxaa jira dhowr siyaabood oo ah wareejinta videos, kuwaas oo u dhaxeeya laba qalab macruufka. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa Lugood ama isticmaal email. Intaas waxaa sii dheer weli waxaad isticmaali kartaa sanduuq airdrop. In this article waxaan idinku hanuunin ku saabsan sida ay u gudbiyaan videos isticmaalaya hab kasta.
Part1: Sidee si ay u gudbiyaan Video From iPhone in iPad Isticmaalka Lugood
Part2: Sidee si ay u gudbiyaan Video From iPhone Si iPad Isticmaalka Airdrop
Part3: Sidee si ay u gudbiyaan Video From iPhone in iPad Isticmaalka Email
Si aad u qabtaan geedi socodka arinkan si guul leh aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan videos on your computer iPhone in a. Version ugu dambaysay ee Lugood ugu wanaagsan idiin samayn doono. Sidoo kale, si loo hubiyo in aad leedahay cable USB ah. Ogaanshaha in hadda raac tallaabooyinkan.
Tallaabada 1 Connect aad iPhone in computer ah
Ku bilow adigoo la xiriirinaya aad iPhone in la isticmaali karo kombuyuutar cable USB ah. Lugood si toos ah u bilaabi doonto laftiisa on your computer. Markaas furo iPhone on suuqa kala Lugood hoostiisa ku icon Devices .
Tallaabada 2 Dooro videos in lagu wareejiyo
Marka aad gujisid aad iPhone icon liiska waxyaabaha aad ku iPhone la soo bandhigi doonaa. Ka dib markii ay sidaas samaynaya guji Codso ka dibna nidaameed badhamada hoose ee suuqa kala Lugood ah. By sidaas samaynaya ka videos la doortay waxaa loo wareejin doonaa your computer.
Tallaabada 3 Connect aad iPad
Hadda bareesada aad iPhone ka kombiyuutarka iyo xiriiriyaan iPad in kombiyuutarka. Tag Lugood on your computer iyo guji icon iPad.
Tallaabada 4 Dooro videos si ay u gudbiyaan kombiyuutar si ay iPad
Oo halkaasaannu ka guji Apps markaas falgali dulqabo si hoose ee suuqa kala guji File Sharing. Markaas guji Add icon t o dooro videos in ay tahay in lagu wareejiyo iPad.
Videos Tallaabada 5 Transfer ka computer si iPad
Ka dib markii xulashada click videos on the nidaameed. click waxa uu u suurtogelin doonaa videos lagu wareejiyo aad iPad. Hadda waxaad ku raaxaysan karaan daawashada buuxa ee videos on your iPad
Airdrop waa hab wireless ah ee files ka qalab macruufka wareejinta. Habkani wuxuu isticmaalaa Bluetooth in la abuuro xiriir ah wireless guud ahaan qalabka. Waxa ay taageertaa version ugu dambeeyay ee qalab macruufka ah ee iPhone iyo iPad isticmaala macruufka 7. Airdrop kuu ogolaanaya in aad wareejiso videos, sawirada iyo waraaqaha u dhexeeya qalab macruufka ah. Iyada oo aad iPad iyo iPhone dhow dahay inay raacaan talaabooyinkan si ay u gudbiyaan files
Tallaabada 1 Guddi Airdrop ku Qalabka aad.
First furo Centre Control ku saabsan iPhone iyo iPad by kabacdi screen ee ay hindiseen kor. Markaas ka jaftaa on Airdrop icon ku saabsan qalabka aad labadaba. Hadda waxaad u baahan tahay in ay doortaan cida aad la wadaagto faylasha aad. Hadda Riix Xiriirada oo keliya . Taasi waxay xiraysaa qofka haysan ka faylasha ay aad u diraya
Tallaabada 2 noqda in aad Videos iPhone in lagu wareejiyo
Riix Photos app aad iPhone . From waxaa wad si Videos in aad rabto in aad u guurto iPad.
Halkan, waxaad u baahan tahay in ay doortaan videos in ay tahay in la wareejiyo. Marka aad salaadda dhamaysatona xulashada dul istaagin ilaa hoos ka tegey oo guji badhanka Share .
Tallaabada 4 Connect ee iPad iyo iPhone
Marka aad gujisid share liiska qalabka xiran muuqan doonaa. Tubada aad la wadaago iPad
Talaabada 5 iibsiga Videos la doonayo
Xaqiijin A waa waajib on your iPad si ay awood files in lagu wareejiyay. Aqbal oo ag maraya in Photos app. Markaas dib u fadhiisan oo ay daawadaan videos in lagu wareejiyo si aad iPad. The ka video markii ugu gaaban ayay qaadan doontaa in la dhaqdhaqaajiyo gaaban.
Ma aha la yaab leh si aad u ogaato dad badan oo halkaas kaliya isticmaalaan emails soo diri waraaqaha. Iyadoo email app aad iPhone iyo iPad aad u isticmaali kartaa si ay u gudbiyaan videos, sawirada, waraaqaha iyo sidoo kale farriimaha. Tani waa sida si ay u gudbiyaan videos on email. Samee cinwaan email ah haddii aadan haysan mid.
Tallaabada 1 Open iyo reserved email on qalab aad
Hubi in aad email waxaa firfircoonaan ku qalab aad.
Tallaabada 2 Open videos in ay tahay in la wareejiyo
Open Photo app aad iPhone. Riix video ah lagu wareejiyo iPad. Tubada ku Share button iyo dooran Mail.
Tallaabada 3 ka koobanahay fariin email ah oo
Sida aad la samaynayso halka diraya fariimaha aad ka koobanahay karaa fariin iyo dar cinwaanka email qaataha . Marka aad files diraya naftaada in ay muhiim ma aha in la abuuro fariin. Marka aad dhamaysato qasabadda ku Send
Tallaabada 4 Open email ah ee aad iPad a0nd badbaadin videos
Warkani ka muuqan doontaa in aad app iPad. Fur mail iyo tubbada ku videos diray oo u badbaadin on your iPad.
Kor ku xusan ayaa jira siyaabo of videos ka iPhone gudbaayo iPad. Dooro mid aad u janjeero iyo wareejiyo aad videos.
> Resource > Transfer > 3 Siyaabo si ay u gudbiyaan Video From iPhone in iPad